FAN, အားပြန်သွင်းနိုင် FAN, DC က FAN အအေး AC အ FAN, - HONGBO
ဝါသနာရှင် Filter ကို
YWF စီးရီး Axial ဝါသနာရှင်
HONGSHUO စုဆောင်းယာယီ, AYATER ကျေးဇူးတင်စကားဤမျှလောက်ကောင်းသောဝန်ဆောင်မှု,! ကျွန်မရဲ့စုဆောင်းယာယီပြဿနာများတယ်, AYA Ter ငါ၏အအရှုံး prventing, အချိန်မီငါ့ကိုကူညီကျေးဇူးတင်စကားဤမျှလောက်ကောင်းသောဝန်ဆောင်မှု, ငါ့ကိုအချိန်မီပြုလုပ်ဖြေရှင်းကူညီ! ကျွန်မရဲ့စုဆောင်းပြဿနာများကိုအချိန်မီပြုလုပ်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ပြဿနာများတယ် ငါ၏အအရှုံး prventing, ကျေးဇူးတင်စကားဤမျှလောက်ကောင်းသောဝန်ဆောင်မှု!
ပြင်ပရဟတ် axial ပန်ကာ
သေးငယ်တဲ့ axial ပန်ကာ
Ningbo Hongbo Weite မော်တော် Co. , Ltd မှ။ AC အ, DC က axial ပရိတ်သတ်များနှင့်ပန်ကာဆက်စပ်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ထုတ်လုပ်အတွက်အထူးကုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အဓိကအားဖြင့်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ, ပါဝါစနစ်များ, ဗီဒို, ဂဟေဆော် devices များ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာယန္တရားနှင့်တူရိယာကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်ရေးအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားအိုင်တီပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်လျှောက်ထားကြပါတယ်။ Hongbo ပရိတ်သတ်တွေရှာဖွေနေကောင်းသော, ကြီးမားသော Airflow နိမ့်ဆူညံသံများနှင့်ကြာမြင့်စွာအသက်တာ၏အင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ ကျနော်တို့ကိုအောင်မြင်စွာအီး, Rohs ခွင့်ပြုချက်ရယူခဲ့ကြသည်။ Hongbo ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီအပိုင်းအစ Hongbo ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ဉာဏ်ပညာ၏ crystal ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ဆယ်စုနှစ်ပြီးနောက် Hongbo အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာဖောက်သည်တစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်အားရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ဥရောပ, အမေရိက, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, အာဖရိက, အရှေ့တောင်အာရှနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အတွက်အချိန်-ဂုဏ်ပြုအရည်အသွေးကိုနှင့်အတူထွက်မတ်တပ်ရပ်ရသောအကြားတခြားနိုင်ငံတွေမှတင်ပို့နေကြ တောင်ကိုရီးယားဈေးကွက်။
17040 fo Ac ပန်ကာ axial 172x150x40 မီလီမီတာငါးခုဓါးသွား ...
AC အ FAN 17050B2H 220V 172 * 150 * 51mm ac axial ပန်ကာ
Axial ဝါသနာရှင် 20 အေး 20060 8 လက်မစက်အတွင်းပိုင်း ...
Ltd. , Ningbo Hongbo Weite Motor Co. ,
© Copyright - 2010-2017: အားလုံးအခွင့်အရေး။ သိကောင်းစရာများ - Featured ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း- မိုဘိုင်းဆိုက်ကို
ပလပ်စတစ်ပန်ကာကိုယ်ရံတော် , rechargeable fan, သတ္တုလှုံ့ဆျော Ac Axial ဝါသနာရှင် , အသေးစားဝါသနာရှင် , axial flow fan, 80mm Fan Guard, အားလုံးထုတ်ကုန်များ